Boohoodle: Dhakhaatiir ka digaya khatarta cudurada dillaaca xilliyada roobka. – Radio Daljir
Boohoodle: Dhakhaatiir ka digaya khatarta cudurada dillaaca xilliyada roobka.
Maajo 4, 2011 12:00 b 0
Buuhoodle, May, 04 – Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Cayn ayaa sheegay in laga yaabo in deegaanka ay ka dillaacaan cudurro khatar ah oo dhimasho keeni kara.
Maxamuud Axmed Daad Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka cayn oo maanta la hadlayey Idaacada Daljir xilli uu booqasho ku yimid Studio-ga Daljir ee Mgaalada Buuhoodle ayaa ka digay khataraha cudurrada ka dhalan kara xili roobaadka Iyo biyaha wasakhaysan ee wadhan wadooyinka Magaalada Buuhoodle.
Md. Daad ayaa sheegay in cudurada ka hortaga u baahan ee xilligan dhalankara ay kamid yihiin, Jadeecadda, Kaneecadda, Shuban biyoodka Iyo Xanuuno kale oo khatar toodu badan tahay, waxyaabaha ugu badan ee xanuunadan sababikara ayaa dhakhtarku ku sheegay qofka uu cabba biyo wasakhaysan, waxaana bulshada uu ugu baaqay inay biyaha iska karkariyaan ka hor inta aysan isticmaalin amaba ay ku daraan daawada loogu tala galay Nadiifinta biyaha ee looyaqaano Clorin.
Roobka Gu?ga ayaa dhawaan ka curtay dhammaanba deegaanada Puntland iyo guud ahaan dalka Somaliya, kuwaas oo aad loogu diirsaday kuna soo beegmay xilli abaar dad iyo duunyaba dishay ay ka jirtay dalka oo dhan. Waxaana mas?uuliyiinta caafimaadka ee Puntland ay sheegayaan in arrintu tahay ?nimco walba nusqaan teeda leh? lagana digtoonaado cudurada ka dhalan kara roobka.
Khadar Cawl Ismaaciil.
Midowga Europe iyo midowga Africa oo ka shiraya kordhinta tababarrada ciidanka Somalida.
Miino ku qaraxday guri hubka lagu kaydiyo oo ku yaalla saldhigga qayba ee magaalada Bossaso.